Ikhaya leholide i-Hof Chirphendorf kunye ne-Wi-Fi, i-Garden & Terrace - I-Airbnb
Ikhaya leholide i-Hof Chirphendorf kunye ne-Wi-Fi, i-Garden & Terrace
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguBookiply
Iindawo zokupaka ziyafumaneka kule ndlu. Izilwanyana zasekhaya azivumelekanga.
Indawo yeholide eyi-65M Hof Chirphendorf, eyinxalenye yefama yeChirphendorf, eseSteinheim, idolophu ekwiphondo laseJamani eliseBaden-Württemberg. Eli khaya linegumbi lokuhlala, ikhitshi elinento yonke elinomatshini wokuhlamba izitya, amagumbi okulala ayi-2 negumbi lokuhlambela elinye ngoko linokuhlala abantu abayi-4. Eli khaya line-Wi-Fi kunye ne-satellite. Abantwana bavumelekile kwaye isitulo sokutyisela usana siyafumaneka.
Igumbi lokulala 1 linebhedi enkulu eyi-1.
Igumbi lokulala 2 lineebhedi ezilala umntu omnye eziyi-2.
Iindwendwe zinokuphola phandle kwigadi enefenitshala okanye zihlale kwindawo egqunyiweyo, zombini ukuze zisetyenziswe bucala. Indawo yangaphandle inendawo yokoja yabucala.
Le ndawo ikwindawo engaphandle kwedolophu, isemaphandleni kakhulu ibe iyibona kakuhle indalo eqala kwiimitha eziyi-30. Ababuki zindwendwe ngabamelwane beli khaya. Eli khaya liqhuba nje imizuzu eyi-9 (iikhilomitha eziyi-3) ukusuka kwindawo yokugcina izinto zaseUgentalsperre kwaye liqhuba nje imizuzu eyi-5 ukuya kweyi-15 (iikhilomitha eziyi-1 ukuya kweziyi-10) ukusuka kwivenkile yokutyela, ibhari, ivenkile enkulu kunye nendawo yokubhaka. Isikhululo seenqwelo-moya i-Stuttgart yiyure eyi-1 kwimizuzu eyi-5 xa uhamba ngemoto ukusuka ekhaya.
Izinto zebhedi neetawuli ziqukiwe kwixabiso. Le ndlu ivelisa amaqanda ayo, iziqhamo, imifuno nemifuno. Iibhedi ezongezelelekileyo ziyafumaneka xa ziceliwe. Izinto zokudlala, iikomityi nezitya zabantwana ziyafumaneka xa kucelwa.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Steinheim am Albuch